ခွေးကလေးကိုအရင်ကာကွယ်ပြီးပြီလား၊ | Dogs World
ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့ခွေး၏ကျန်းမာရေးကိုအမြဲတမ်းကောင်းမွန်စေလိုသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သူ၏အသက်အရွယ်နှင့်ကိုက်ညီသောအစားအသောက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အပြင်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဆရာဝန်ကိုခေါ် ယူ၍ ခွေးအားပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန်လိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေသူမြား။ ဒီလိုမျိုး, မှိုနှင့်ဗက်တီးရီးယားပိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗက်တီးရီးယားများစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲကြီးထွားနိုင်လိမ့်မည်အထူးသဖြင့်သင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကသင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည်အားဖြည့်အဆင့်သို့ရောက်သောအခါဖြစ်သည်။
သို့သော်ခွေးတစ်ကောင်လိုအပ်သောပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ကားအဘယ်နည်း။ သူတို့မှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသလား။ ကျနော်တို့ဒီအထူးအကြောင်းအများကြီးပို။ ဒီအကြောင်းပြောဆိုသွားကြသည်။
5 ပထမ ဦး ဆုံးခွေးပေါက်စကာကွယ်ဆေး၏စျေးနှုန်း
ခွေးကလေးတစ်ကောင်ကိုအိမ်သို့ခေါ်လာသည့်အခါ၎င်းကိုဆေးကုသမှုဆေးခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ မင်းကျန်းမာရေးကောင်းနေရင် မင်းကိုဆေးထိုးဆေးပေးစမ်းသင်၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအတွင်းပိုင်းကပ်ပါးပိုးများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်သူ့ကိုအိမ်သို့ပို့ပြီးသူသောက်ခဲ့သည့်ဆေးလုံးပေါ် မူတည်၍ တစ်ပတ်မှ ၁၄ ရက်အကြားပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ပြန်လာရန်ပြောလိမ့်မည်။
သင်တို့အချို့သည်ကာကွယ်ဆေးများသည်မည်သည့်အရာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားမည်သည့်အရာဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်းစူးစမ်းလိုကြသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုယ်တိုင်ကအားနည်းသွားသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတိရိစ္ဆာန်များ (လူများကိုပါ) ပေးတယ်ဆိုတာထူးဆန်းနေပုံရပေမယ့်ခုခံအားစနစ်ကိုတီထွင်ဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကနောက်ပိုင်းမှာပြင်ပနဲ့ထိတွေ့မိရင်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်။
ဒါပေမယ့်၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကာကွယ်ဆေးထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကို၊ မည်သည့်ထိခိုက်မှုကိုမျှမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ မင်းရဲ့ခွေး
ခွေးအပြည့်အဝနှိမ်နင်းပြီးတာနဲ့ပထမ ဦး ဆုံးကာကွယ်ဆေးအသက်တာ၏ခြောက်လနှင့်ရှစ်ပတ်အကြားပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်မှာသူတို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးဆေးထိုးပေးထားသည် parvovirusနှင့်အခြားထံမှ ကွမ်းခြံကုန်းခွေးပေါက်စများမကြာခဏခံစားနေရသည့်အလွန်လေးနက်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခွေးများနှင့်လည်းအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်လိုပါက bordertella နှင့် parainfluenza ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အကြံပြုထားပါသည်။
ကိုးပတ်ကြာသောအခါသင့်အားကာကွယ်ပေးမည့်ဒုတိယကာကွယ်ဆေးကိုသင်ပေးလိမ့်မည် adenovirus အမျိုးအစား 2, ကူးစက်တတ်သောအသည်းရောင်စီ, ဆေးရုံ y parvovirus။ သူသည် ၁၂ ပတ်သားအရွယ်တွင်ဤကာကွယ်ဆေး၏ထိုးဆေးကိုထပ်ခါတလဲလဲရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူနှင့်အတူစိတ်ငြိမ်သက်မှုအပြည့်ဖြင့်လျှောက်လှမ်းနိုင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
လေးပတ်အကြာမှာတော့ကာကွယ်ဆေးထိုး rabiye။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တွင်ငါးကြိမ်ကာကွယ်ဆေး (parvovirus, distemper, အသည်းရောင်ရောဂါ၊ parainfluenza, leptosipirosis) နှင့်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးသည်။
အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့်သင်သည်၎င်းတို့အားသင့်အား၎င်းတို့အားထောက်ပံ့ပေးရန်သင်တောင်းဆိုနိုင်သည် leishmaniasis ကာကွယ်ဆေး အသက် ၆ လမှခွာလျှင်ခွေးသည်ကျန်းမာကြောင်းအတည်ပြုရန်စမ်းသပ်မှုပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ၂၁ ရက်အကြားခွဲခြားထားသည့် ၃ ခုကိုထိုးပါလိမ့်မည်။ နှစ်စဉ်အခြေခံအနေဖြင့်၊ ၎င်းကိုအားဖြည့်ရန်အတွက်ဆေးအသစ်တစ်ခုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ခွေးတစ်ကောင် leishmaniasis ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကိုဘယ်လို
El microchip ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည် (စပိန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်)၊ ၎င်းသည်ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါမည်သည့်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဆေးခန်းမှမဆို၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်၏လည်ဆွဲပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တပ်ထားခြင်းကမထိခိုက်ပါသင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူ
အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောခွေးများသည်သူတို့ခံစားရနိုင်သည် ဒေါ်လိုရေစ် o ယားယံခြင်းကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နေရာ၌ပင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အချိန်တိုအတွင်းတွင်ဖြစ်တတ်သည်။
အလွန်လေးနက်သောကိစ္စများတွင်သူတို့သည်ခံရနိုင်သည် ခန္ဓာဗေဒကိုယ်ခန္ဓာကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းသည်၎င်း၏သွေးနီဥများကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်။ သို့သော်အလွန်ရှားပါးသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးခွေးပေါက်စကာကွယ်ဆေး၏စျေးနှုန်း
စျေးနှုန်းများသည်ပြည်နယ်တစ်ခုစီ၌သာမကအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီ၌ပင်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းစပိန်နိုင်ငံရှိစျေးနှုန်းများသည်တစ်ဝိုက်တွင်ရှိသည် ယူရို ၂၀-၃၀ စီ။ Leishmaniasis အတွက်ပထမသုံးလုံးသည်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူယူရို ၁၅၀ နှင့်ပြန်လည်ကုစားရန် ၆၀ ယူရိုကုန်ကျသည်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ခွေးအသက်တာ၏ပထမနှစ်သည်အမြဲတမ်းစျေးအကြီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုလက်ခံရရှိရန်အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေပေးရမည့်ဘဏ်တစ်ခုလုပ်ရန်လိုသည်။
ကောင်းပြီ၊ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာအချို့ရှိတယ်ဆိုတာသိထားသင့်တယ်၊ သူတို့ကယူနိုင်တယ်။ ထို့အပြင် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသောခွေးသည်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောရောဂါများအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်distemper လိုပဲ။ ထို့အပြင်သင်၏ခွေးတစ်ကောင်သည်ရောဂါအချို့ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိခွေးများကိုလည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
ခွေးတစ်ကောင်သည်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးရမည့်စောင့်ရှောက်မှုထဲတွင်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးကုသမှုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်, သင့်ခွေးကိုကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အထူးအကြံပြုလိုသည် ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုအလျော့မပေးပါဘူး
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများစွာရှိပါသည်။ ခွေးကလေးသည်အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးမထိုးမှီမထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းကြာမြင့်စွာကပင်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်များကပြောကြားခဲ့သည်။ ငါတို့မှာလူမှုဆက်ဆံရေး၏နံရံလေးခုအတွင်းယင်း၏အထိခိုက်မခံဆုံးကာလကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုရှိသည်။ ဤကာလသည်နှစ်လမှစတင်ကာသုံးလတွင်အဆုံးသတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရှစ်ပတ်ထက်မပိုသောကာလဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင်လုပ်နိုင်သည် အခြား furry တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိရမည် (ခွေးများ၊ ကြောင်များနှင့်မနက်ဖြန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရမည့်သူအားလုံးနှင့်အတူ) နှင့်လူတို့နှင့်အတူဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူကြီးပြင်းလာတဲ့အခါသူတို့နဲ့အတူရှိနေဖို့၊ သူတို့နဲ့အတူနေဖို့သင်ယူဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပင်အချို့သောပညာရှင်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် ငါနင့်ခွေးကလေးကိုနှစ်လမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ပြောမယ်.
ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ မင်းသူ့ကိုဘယ်နေရာမဆိုခေါ်သွားလို့မရဘူး။ ခုခံအားစနစ်ကိုမဖွံ့ဖြိုးသေးသေးပါ၊ ကာကွယ်ဆေးအားလုံးကိုသူမရရှိနိုင်ပါက၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများစွာကိုမလုပ်ဆောင်ပါကသူ၏ကျန်းမာရေးနှင့်သူ၏အသက်ကိုပင်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ခွေးများသွားသည့်နေရာများသို့မဟုတ်အလွန်ညစ်ပတ်သည့်နေရာများသို့သင်ဘယ်တော့မျှသွားစရာမလိုပါ၊ သို့သော်သန့်ရှင်းပြီးဆိတ်ငြိမ်သောလမ်းများမှတစ်ဆင့်သင်၏မိတ်ဆွေသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အရေးပါသောမြို့ပြများ၏ဆူညံသံကိုအသုံးပြုလာသည် (ကားများ) , ကုန်တင်ကား, etc) ။
စီးရန်ဘယ်လောက်ကြာပါမလဲ ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်နှိုက်ပေါ်တွင်မူတည်သည် မိနစ် ၂၀ ကျော်ကြာရန်မလိုပါသူငယ်ငယ်တုန်းကအရမ်းပင်ပန်းတယ်။ ထို့ကြောင့်ရှည်လျားသော ၁-၂ မိုင်ထက် ၄-၅ တိုတိုလမ်းလျှောက်ခြင်းကအမြဲတမ်းပိုကောင်းမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » လမ်းပေါ်မထွက်ခွာမီလိုအပ်သောကာကွယ်ဆေးများ
102 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အသက်တာ၏ပထမနှစ်တွင်တိရိစ္ဆာန် ၇ ခုကာကွယ်ဆေးကိုသင်မည်သို့ပေးမည်နည်း။ သင်ဝက်အူပျောက်နေသည်။
ကာကွယ်ဆေး (၇) ခုနှင့် (၁၂) လမ်းကြားအကြားတွင်၎င်းကိုအကာအကွယ်ပေးထားသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ နေ့လည်ခင်း၊ အိမ်၌ ၃ လအရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရှိသည်။ သူ၌ paruvirus ရှိသော်လည်းသူ၌ကာကွယ်ဆေး ၅ လုံးရှိပြီ။
သင်၌ parvovirus ကာကွယ်ဆေးရှိပြီးသားဆိုလျှင်သင်သွားနိုင်သည်၊ ပြproblemနာမရှိဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ၁၂ ပတ်ကြာခွေးကလေးကမကောင်းဘူးဆိုရင်။
ကျနော်တို့ covid ၏ပြtheနာအပေါ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပိုက်ဆံအများကြီးသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ပါတိရိစ္ဆာန်ဆရာမရှိ, ကကူညီပေးသည်
သူမမှာ parvovirus နှစ်ခုရှိပြီးသားသုံးခုကတော့ distemper အတွက်ပါ။ ငါသူမကိုအိမ်ပြန်ပို့ဖို့သေချာစေချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမသေချင်တဲ့တခြားခွေးတစ်ကောင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်
ကျွန်တော်သင့်ကိုနားလည်တယ်။ ပြnoနာမရှိဘူး။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသံသယရှိပါက၊
ငါမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါမှာခွေးပေါက်စ ၆ ကောင်ရှိတယ်။ တစ်ပတ်အကြာမှာသူတို့ကနှင်းရည်စိမ်ခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ VET က ၂ လသားအရွယ်မှာပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလိမ့်မယ်၊ အခန်းကိုလှည့်ပတ်နေတုန်းပဲ၊ ငါတို့လမ်းအပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါသူတို့ကမြေဆီလွှာရောဂါရလို့ငါ့ကိုစိုးရိမ်တယ်။
သူကငယ်သေးတယ်။ ၎င်းသည် ၁၂ ပတ်အတွင်းဒုတိယမြောက်အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းရိုက်ချက်ဖြစ်သည်။
Edgar Javier Olguin Reyes ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ဒီစနေနေ့မှာ ၆ ပတ်ကြာတဲ့ရွှေရုပ်တုခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ ဒီနေ့ parvovirus ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်စနေနေ့အထိစောင့်ရတယ်။
Edgar Javier Olguin Reyes အားပြန်ပြောပါ
၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိကာကွယ်ဆေးထိုးရန်မတိုက်တွန်းပါ။
YESENIA GARAY ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် yesenia ငါဗာဂျီးနီးယားမှာနေတယ်၊ ​​ငါမှာခုနစ်ပတ်ကြာတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ ငါသူ့ကိုမှတ်ပုံတင်လို့ရမလားဆိုတာသိချင်တယ်။
YESENIA GARAY အားပြန်ပြောပါ
၇ ပတ်အကြာတွင်ပိုးကောင်များကိုပထမဆုံးကုသနိုင်သည်။ ၁၀ ရက်ခန့်အကြာတွင်သင်သည်ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးကိုရနိုင်သည်။
ဖာနန်ဒို Martinez ဟုသူကပြောသည်
Hello Monica၊ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ကမွေးဖွားသော fox terrier ခွေးကလေးကိုကျွန်ုပ်အိမ်သို့ယူဆောင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်အားရောင်းသူတွင်ကျွဲနွားများရှိပြီးခွေးများမွေးမြူရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ၊ သူ၌ခွေးတစ်ကောင်ရှိပြီးသူမထံမှအခြားမြေခွေးကောင်မလေးနှင့်သူမနှင့်လက်တွဲလိုသည်။ နောက်မြို့တစ်မြို့။ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်မှာသူကသူ့ကိုဇစ်ပီရန်းဆေးပြားတစ်ဝက်ပေးပြီး ၁၂ ခုမြောက်တွင်သူက maxivac prima dp ကာကွယ်ဆေးကိုသူကဖန်ခွက်ကွန်တိန်နာနှစ်ခုထဲမှတစ်ဆင့် distemper virus နဲ့အခြား parvovirus virus ကိုပါပေးတယ်။ ငါမနေ့က (၁၂) နေ့မနေ့ကသူမအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးပြီ။ သူ့ကိုလမ်းပေါ်ထွက်ခေါ်သွားနိုင်သလား။ သူမကိုကာကွယ်ဆေးထိုးရန် VET ကိုဘယ်တော့သွားမှာလဲ၊ သူတို့လိုအပ်မလိုမသိဘူး၊ အရူးလုပ်မခံချင်ဘူး
သူတို့သူမရဲ့အသားကုန်ကြမ်းတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ PS သူမကငါ့ကိုကားထဲမှာလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အန်တာ၊
fernando martinez အားပြန်ပြောပါ
ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်အချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ခွေးအလွန်များသည့်နေရာများနှင့်သန့်ရှင်းသောနေရာများတွင် (အခြားခွေးများသို့မဟုတ်အခြားတိရိစ္ဆာန်များမှမစင်များမရှိသည့်နေရာ) တွင်၎င်းကိုသင်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်ထောင်ချောက်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ သူသည်နှစ်လသို့မဟုတ်သုံးလရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်ယောက်ျားလေးနှစ် ဦး နှင့်ခွေးတစ်ကောင် ရှိ၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်အလွန်ကြောက်မိသည်။
ငါအကြံပေးချင်တာကသူကိုသူ့မှာ microchip ရှိမရှိသိအောင်သူ့ကိုတိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ဆီခေါ်သွားတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကခွေးပေါက်လေးတစ်ကောင်လိုမျိုးထူးဆန်းတာကြောင့်ခွေးကလေးတစ်ယောက်ဟာလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတာနဲ့လမ်းမှာလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတာပါပဲ။ စွန့်ပစ်
ထို့နောက်တူညီသောအကြောင်းပြချက်အတွက်ပိုစတာများကိုတင်ထားရန်အကြံပြုလိုသည် - တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
၁၅ ရက်ကြာမှဘယ်သူမှမတောင်းဆိုဘူးဆိုရင်၊ သင်သိမ်းထားမလားဆိုတာကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်စောင့်ရှောက်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင်၎င်းသည်သူသည်အခြားခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးအတူတူပင်လိုအပ်သည် - ရေ၊ အစားအစာ၊ ချစ်ခင်မှု၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဂိမ်းများနှင့်နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ခြင်းများကိုပြောပြပါ။ ပြaနာရှိစရာမလိုပါဘူး
မင်နီကာ ငါ့ခွေးမှာတစ်လမှာခွေးပေါက်စ ၈ ကောင်ရှိတယ်၊ ငါသူတို့ကိုကာကွယ်ဆေးမပေးခင်ဒါမှမဟုတ်အပြီးမှာနှင်းဖုတ်ဖို့လိုသလား။ ငါမှတ်မိတော့ဘူး
အမြဲတမ်း dewormorm မတိုင်မီ၊ before မတိုင်မီ ၁၀-၁၅ ရက်ပတ်လုံး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်လခွဲတစ်လခန့်ညှိုးနွမ်းနေသောနှင်းများကျနေပြီး parvovirus ပထမတစ်ခုကိုတင်တော့မည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမအားတိတ်ဆိတ်စွာနေနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သူသည်နှစ်လမပြည့်မှီခဏစောင့်ပါ ဦး ။ ထို့နောက်သူမအားလမ်းလျှောက်ထွက်သွားပါ၊ အခြားခွေးများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြောင်များမစင်ကဲ့သို့အညစ်အကြေးများမကပ်မိစေရန်သတိထားပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Samoyed ခွေးကလေးရှိသည်၊ ၎င်းသည် ၃ လသားအရွယ်ရှိပြီးသင်ဘလော့ဂ်တွင်သင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းသူမအားကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့သည်။ ငါစီမံသောကာကွယ်ဆေးသည်အeight္ဌမ (adenovirus type 3, parainfluenza နှင့် canine parvovirus) ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်ငါ့ကို distemper ကာကွယ်ဆေးသည်ကွဲပြားခြားနားခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားဘာမှမပြောခဲ့ပါ။ သို့သော်သူ၏တတိယမြောက်အာနိသင်တိုးမြှင့်သည်အထိကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့သာလိုအပ်တယ်၊ မထင်ဘူးလားလို့ပြောတယ်။ .mmm ဒီကာကွယ်ဆေးကပျောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုငါသံသယကနေနှင်ထုတ်နိုင်မလား။
အကယ်၍ သင်သည်သာမန်ဘဝတစ်ခုနှင့်နေထိုင်ပြီးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပါက၊ သင်သည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ၊ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာဆိုက်ဘေးရီးယားအခွံခွေးကလေးပါ။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းကတော့သူဟာတစ်လခွဲလောက်ကထက်ပိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာစနစ်တကျရှိတာပါ။ ၀ န်ကြီးကအရာအားလုံးကိုကောင်းစွာပိုးမွှားဖို့ပြောတယ်။ ငါတို့ကိုလေးကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်၊ ငါတို့သူ့ကိုခွေးကလေးကိုပေးလိုက်တယ်၊ သူကသူ distemper ကိုရနိုင်မလား? " ပြီးတော့ငါအိမ်ထဲမှာတစ်နှစ်အရွယ်ခွေးကလေးလည်းရှိတယ်။
ကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်မှာအမြဲတမ်း is ရှိသော်လည်းကာကွယ်ဆေးဖြင့်သင့်အား ၉၈% အကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် distemper နှင့်အဆုံးသတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
လူးဝစ် Alberto Mayorca လီယွန် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းလိုက်တဲ့အချက်အလက်များ၊ ကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မှာ ၇ လအရွယ်ခွေးကလေးရှိတယ်၊ တစ်လသားအရွယ်မှာနှင်းရည်ကျတာ၊ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးဘူး၊ ၇ လအရွယ်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့နောက်ကျလွန်းနေပြီလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !
Luis Alberto Mayorca Leon အားစာပြန်ပါ
မဟုတ်ပါ၊ ဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ🙂။ ငါပြောနိုင်တာကသူမခြောက်လတုန်းကငါ့ရဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားလိုက်ပြီးသူမအတွက်ပြproblemနာမရှိဘဲသူနဲ့သင့်လျော်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သိကျွမ်းထားသည့် ၂ လခွဲအရွယ်ခွေးပေါက်စနှင့်အတူနေလိုသည်၊ သို့သော်သူကသူ့ကိုပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးမျှမပေးခဲ့ပါ၊ သူသည်အခန်းထဲတွင်မဟုတ်ဘဲကောက်ရိုးနှင့်သန္ဓေတည်နေသည်။ သူ့ကိုလူသားတို့စားစရာဘို့ပေးတော်မူပြီ။ ငါဘာမှပေးမထားဘူး၊ ပြီးတော့ပိုးကင်းအောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့နောက်ကျလွန်းရင်ငါသူနေမကောင်းဖြစ်မှာကိုငါစိုးရိမ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
- ကာကွယ်ဆေးများ - ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်နောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့၊ ၂ လခွဲခွဲကြာရင်သင့်မှာ ၅-၆ ယောက်ကိန်း ၂ ရှိသင့်တယ်။
- ပိုးသတ်ရန် - ၆ လအကြာတွင်ပြုလုပ်သည်။
အစားအစာ - သဘာဝကသဘာဝလေ၊ ကောင်းလေလေ။ စံပြကသူတို့ကိုသဘာဝအသားတွေပေးဖို့အတိအကျပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမတတ်နိုင်ရင်စီရီရယ်မပါတဲ့အစာကိုကျွေးဖို့အကြံပေးတယ်။
- ပိုးမွှား - ကာကွယ်ဆေးမထိုးမီ ၁၀ ရက်အလိုတွင်ပြုလုပ်ရမည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးခွေးကအသက် ၆ လရှိပြီးကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးသာကျရင်ဘာဖြစ်မလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားခဲ့ပြီးသူမအားတစ်ပတ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ကာကွယ်ဆေးကိုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးများသည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါစွန့်စားနိုင်တယ်။ ခွေးကလေးကိုနေမကောင်းတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကနေအကုန်လုံးမှာသူမပိုကောင်းတဲ့အထိစောင့်ရှောက်ထားတယ်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ အိမ်မှာ ၅ ပတ်ကြာတဲ့နယ်စပ်ဒေသကော်လာကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးမှထွက်သွားနိုင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် cristina ပါ၊ သူလမ်းလျှောက်ဖို့သွားနိုင်သည့် ၅ ပတ်အလိုနယ်စပ်ဒေသကော်လီစာရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Morgana sotres ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ခွေးရူးပြန်ရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါးမှခွေးကလေးကိုကျွန်ုပ်မွေးစားခဲ့သည်။ သူမကိုသူမအားနှင်းစုန်းမကုသရန်ကုသမှုပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ကာကွယ်ဆေးမပါပဲ။ သူမကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မယ့်အချိန်မှာတိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကိုမေးပြီးသူမကသူမသောက်ဖို့ရက် ၁၀ ပတ်စောင့်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်နေတာမို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားတွေရှိနေပြီဆိုတာငါတို့မသိဘူး။ ကျွန်ုပ်ကိုသင်ထောက်ခံကြောင်း ၁၀၀% မယုံကြည်ပါ။ ??? စောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ယခုကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သူ့ကိုယူ?
Morgana Sotres သို့ပြန်သွားပါ
အကယ်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရန် ၁၀ ရက်စောင့်ဆိုင်းရန်အကြံပြုပါကကာကွယ်ဆေးသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်စောင့်ဆိုင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးနှစ်ချပ်ဖြင့်နှင်းစဲနေသည့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားခဲ့သည်။ အမှန်မှာသူတို့သည်ကဒ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်မေ့နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ မနေ့ကငါနောက်ဆုံးတစ်ခုထားပေမယ့်မွေးစားငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ခုသာပေါ်လာသည်။ သူကသုံးလသားဖြစ်ပြီးသူကသူ့ကို quadrivalent ကိုပေးတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုကိုတကယ်မတင်ထားလျှင်ပြaနာရှိပါသလား။
Maria Fer သို့ပြန်သွားပါ
Pilar Molina ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၌ကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်အသက်အရွယ်ရှိသော yorkie ကိုနေ့စဉ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်သည် VT ကုသမှုခံယူခဲ့သည့်ပထမကာကွယ်ဆေး ၂ လုံးနှင့် ၅ လအရွယ်အမျိုးသမီး yorkie ကို ၀ ယ်ယူခဲ့ပြီးသူမအားကုသမှုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာသူမမှာပြသနာမရှိကြောင်းဖြစ်သည်။ ငါ့အခြားခွေးနှင့်အဆက်အသွယ်ကစား? သူသည်ပန်းကန်မှပင်ရေကိုသောက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pilar Molina မှစာပြန်ရန်
မင်္ဂလာပါ Pilar ။
ကောင်းပြီ, အန္တရာယ်အမြဲရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခွေးလေးနက်သောရောဂါရရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မတို့အိမ်မှာခွေးကလေး ၂ ပတ်ရှိနေပြီ။
ခွေးများသည်အဓိကကာကွယ်ဆေးထိုးရန် (သို့မဟုတ် ၀ တ်ဆရာ ၀ န်ကဖော်ပြသည်ကဲ့သို့) အပြင်ဘက်သို့ထွက်ရန်အစဉ်စောင့်ဆိုင်းသင့်သည် (သို့) ခွေးကနည်းနည်းလေးသာ ထွက်၍ လူမှုရေးကို ဦး စားပေးလျှင်ပိုကောင်းပါသလား။
ကောင်းပြီ, အဲဒီအကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များရှိပါတယ်။ သင့်တွင်ကာကွယ်ဆေးအားလုံးမပြည့်မှီမီစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်သောသူများနှင့်၎င်းကိုယခုရယူရန်ပိုကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်၏ခွေးများကို (၂) လခန့်လမ်းလျှောက်ရန် (ဟုတ်ကဲ့၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောလမ်းများမှတစ်ဆင့်) နှစ်လတာကာလအတွင်းတွင်၎င်းတို့သည်ကာကွယ်ဆေးသာရှိကြောင်း၊ ပြproblemနာမရှိခဲ့ပါ။
လူမှုဆက်ဆံရေးကာလသည်သုံးလတွင်ပြီးဆုံးလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပါ။ ခွေးများ၊ ကြောင်များနှင့်ယခုသင်အဆက်အသွယ်မရခဲ့လျှင်၎င်းသည်သူတို့နှင့်အဆင်ပြေရန်သင်ပိုမိုကုန်ကျလိမ့်မည် (ငါသည်လည်းသင်အတွေ့အကြုံမှသင်ပြောပြသည်) ။
ဗစ်တိုးရီးယား Celis ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်နှစ်လခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ သူ၌ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးဖြစ်သည်
ငါကကားဖြင့်နှင့်လမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိဘဲယူလိမ့်မယ် ... ဖြစ်နိုင်သလားသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိပါသလား?
Victoria Celis သို့ပြန်သွားပါ
အာနိုက် ရိုဒရိုဂွက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို pug ခွေးလေယာဉ်နဲ့ (၂ နာရီကြာလေယာဉ်ပျံ) ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူမမှာ ၄၇ ရက်ရှိပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်နှင်းမကျခြင်းစသည်တို့ပါ။ ငါအသက်အရွယ်မှာစွန့်စားမှုအများကြီးစွန့်စားနိုင်မလားမသိချင်ဘူးလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Anaite rodroguez အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်သည် ၃ လခွဲကြာသည့်ခွေးကလေးအားကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်ကဒ်တွင်ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ပထမဆုံးထိုးပေးသောပထမကာကွယ်ဆေးကိုသာလျှင်ကျွန်ုပ်သောက်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ Alvaro ။
၎င်းသည် VET ပေါ်မူတည်သည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်နောက်လကိုထည့်လေ့ရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ စနေနေ့မှာမေလ ၃ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Beagle ခွေးကလေးကိုငါတို့ရွေးလိုက်တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို (hydatidosis နှင့် virbaminthe နှင့်အတူအတွင်းပိုင်းကနေ) နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးခွေးကလေးကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကို dewormed ပေးခဲ့တယ်။ သူတို့အားလုံး ၆/၁၅ ပေါ်မှာထားတယ်။ မနေ့က VET အိမ်ကိုလာပြီးသူ့ကိုတကြိမ်ထိုးတယ်။ primer ထဲမှာသူကစတစ်ကာနှစ်ခု (ယူအက်စ် chp mhp Lmulti) ထည့်ထားတယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြတာကဒေါသနဲ့ချစ်ခြင်းပဲ။ ဤအရာသည်ငါတိုးချဲ့ခဲ့သောကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်းငါရှင်းပြချင်သည်မှာငါမေးချင်သောခွေးပေါက်စကာကွယ်ဆေး3မဟုတ်လော သူကအဲဒါကိုသူရှင်းပြခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့နာမည်တွေအများကြီးနဲ့ပဲ။ သူ primer ထဲမှာဘာတွေထည့်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းသူ့ကိုလမ်းပေါ်ထွက်ခေါ်သွားလို့ရမလား။ သူက ၁၀ ပတ်ပဲရှိသေးတယ်
ကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့၊ ခွေးများအတွက်ကာကွယ်ဆေးများမှာ ၃။ သူ့ကိုသူ့ကို ၁ တွင်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းတွင်ကာကွယ်ဆေးနှစ်စ်နှင့် ၁၀ ပတ်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်ရနိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, စင်ကြယ်သော site များအတွက်။
မိသားစု ၀ င်သစ်အားနှုတ်ခွန်းဆက်သမှု။
afternoonပြီ ၁၈ ရက်မှာမွေးဖွားတဲ့နှစ်လသားဂျာမန်သိုးထိန်းခွေးကိုသူတို့ပေးလိုက်တယ်။ ငါက ၁၅ ရက်အကြာဇွန်လ ၁၀ ရက်မှာပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနှင်းရည်ကျတဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာနောက်တဖန် Dormormer ခဲ့ဒါငါလုပ်ခဲ့တယ်; ဇွန်လ ၂၃ ရက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဆေးအတွက်ငါသူ့ကိုတစ်ရက်မတိုင်ခင်ယူပြီးဒုတိယကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့တယ်။ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ကသူ့ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့တတိယကာကွယ်ဆေးအတွက်ငါအဆင်ပြေသွားပြီ။ ငါကအခြားတိရိစ္ဆာန်ဆရာတစ်ယောက်လိုသွားရမယ်။ အဲဒီမှာဆရာဝန်ကငါ့ကိုသူမကာကွယ်ဆေးထိုးပေးစေချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ သူဟာဘာမှမရှိသည့်အလားအရာအားလုံးမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင်သံသရာကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်စတင်ရန်အချိန်ရောက်ပြီဟုငါပြောပြီးကြောက်ခဲ့သည်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ သူသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်တွင်သူသည်အစီအစဉ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အစိမ်းရောင်ဖြစ်သောအစိမ်းရောင်တောက်ပသောကန်နာဂင် MHA18PPi နှင့် Canigen L နှစ်ပေါင်း ၁၅ နှစ်ကြာသောဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ကထိုတိုက်စစ်မှူးနှစ် ဦး ကိုထပ်မံ ထပ်မံ၍ တတိယကာကွယ်ဆေးအတွက်သူတီထွင်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးပေါက်စတွင် ၃ လနှင့် ၉ ရက်ရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကာကွယ်ဆေးအားလုံးမထိုးမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သူမကိုမထုတ်နိုင်ကြောင်းသူမကပြောကြားခဲ့သည်။ သူမစိတ်ဖိစီးမှုများလာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်သူမကိုပေါင်းသင်းပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ သူမကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ပိုမျှော်လင့်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဆရာ ၀ န်ကပြောတာကပထမနှစ်ယောက်ကသူမနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ ငါရေချိုးလို့ရရင်ငါရေချိုးခန်းကိုအတူတူယူတယ်၊ မင်းရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်ယခုထုတ်ယူနိုင်သည် သူမသည်အခြားခွေးများ၊ လူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စင်ကြယ်တဲ့လမ်းတွေကနေဖြတ်မောင်း။
ဆယ့်ငါးရက်လောက်က ၁ ငါ့ကို parvovirus ဖြင့်ပုံသေသေသပ်စွာသေခဲ့သည်။ The ။ သူတို့နေမကောင်းရောင်း သူမသည်ကျွန်မတို့နှင့်အတူ ၆ ရက်သာနေထိုင်ခဲ့ပြီး ၃ ယောက်မှာဆေးရုံတွင်ရှိနေသည်။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးအခြားခွေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်သည်။ သူမကယခုအချိန်တွင် ၄၀ ရက်ရှိပြီးသူမသည်သူမအား deparacite ဟုပြောခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်ရန်။ ငါသူမ၏ရက်သတ္တပတ်ကာကွယ်ဆေးထိုး။ အမှန်တရားကတော့ငါ့ကြောင့်ငါအိမ်ကိုယူဖို့ကြောက်တယ်။ သူတို့ကပြောကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်သည်အားကောင်းသည်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများများစွာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ သူနဲ့အတူသူရှိနေဖို့ကျွန်မမစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများအပြားветеринарကိုမေးမြန်းသကဲ့သို့နည်းတူကူညီပါ။ သူကပထမ ဦး ဆုံးပြောတာကအချိန်တိုအတွင်းပေါ့၊ ဒုတိယကတော့ငါပိုးသန့်ဆေးထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ၀ ယ်ပြီးအရင်ခွေးမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
မာရီယာ Lavado Sanchez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောည၊ ကျွန်ုပ်သိချင်တာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် poodle ရှိပြီး ၃ လသာအလှည့်ရောက်နေပြီ။ ဘာဖြစ်မည်နည်း၊ ၎င်းသည်နှစ်လကာကွယ်ဆေးသို့မဟုတ်သုံးလကာကွယ်ဆေးမရှိပါက ... ငါသွားမည် ဒီစနေနေ့ကိုယူမယ်၊ မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဒီမှာထားမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်လစောင့်နိုင်မယ်လို့ထင်လား? ပြaနာရှိလား
María Lavado Sánchezအားပြန်ပြောပါ
မဟုတ်ပါ၊ တစ်နေ့တည်းတွင်သင်ကာကွယ်ဆေးဤမျှလောက်မရသင့်ပါ။ VET ကသင့်ကိုနှစ်လကာကွယ်ဆေးပေးလိမ့်မယ်၊ နောက်လကသင့်ကိုသုံးလကာကွယ်ဆေးပေးလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောညဖြစ်ပါစေ၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို ၆ လအရွယ်ခွေးကလေးကိုပေးခဲ့ပေမယ့်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရပါဘူး၊ ဘာပေးသင့်သလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ဘာလုပ်သင့်လဲ
ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက်သင်သူ့ကိုветеринарияသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ သင်အသက်မည်မျှပင်ရှိပါစေ - ယခုသင်သည်ပြproblemနာမရှိဘဲယခုကာကွယ်ဆေးကိုစတင်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်း ၂ ခုရှိတယ် - ပထမ။ ငါ၌ ၂ လအရွယ်ရှိသူနှင့်ကြက်သီးမွေးပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့် rotweiler ခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ သူမ၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကသူမသုံးဆနှင့်ထပ်တိုးသွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
နှင့်ဒုတိယ .. esq ထိုနေ့တွင်ပင်သူမ deworming ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသူမကို deworm နှင့်ထိုနေ့တွင်ပင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန်အကြံပြုလိုလျှင်ကျွန်ုပ်သိလိုခဲ့သလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်စောင့်ရမည်လော။
တိုင်းပြည်တိုင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ဆရာအားလုံးပင်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာကြသည်။ အဘယ်သူမျှအခြားသူများထက်ပိုမိုဆိုးရွားသို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ချင်းစီဒေသအတွင်းရှိခွေးကိုထိခိုက်အများဆုံးရောဂါများပေါ်မူတည်။ တစ် ဦး ချင်းစီကသူ့နောက်လိုက်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ ၁ လနှင့် ၆ ရက်သာရှိသောခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ လမ်းပေါ်မှာယဇ်ပုရောဟိတ်ရဲ့အမှားကိုကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်ကျူးလွန်မိပြီးသူမကိုအရမ်းတွေ့နေရတယ်၊ ငါမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုမှာသူ၌တစ်ခုခုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သူမကိုအင်္ဂါနေ့အထိဆေးခန်းမသွားနိူင်ပါဘူး။ ။ ကြည့်ကြရအောင်မင်းငါ့ကိုတစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းလို့ရပြီ သူတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အရမ်းကြောက်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ခွေးနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ပါ။
မင်းရဲ့ခွေးဘယ်လိုနေလဲ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာသူမကိုအိမ်တွင်ထားရှိပြီးသူမ၏အစာစားချင်စိတ်ကိုမဆုံးရှုံးစေရန်သူမ၏စိုစွတ်သောအစာ (သံဗူး) များကိုပေးပါ။
သံသယဖြစ်တဲ့အခါငါ VET နှင့်တိုင်ပင်အကြံပြုပါသည်။ သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့ - သန့်ရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းလျှောက်သွားပြီးကောင်းကောင်းဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်ပြnoနာမရှိပါဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌မကြာသေးမီကသေဆုံးခဲ့သောခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းအရင်းကတော့မသိခဲ့ပါ ဒါပေမယ့်သူက ၆ ပတ်နီးပါးရှိပြီ။ သူ့ကိုသူ့ကိုပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီးနောက်မှာသူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့နိုင်မလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ သို့မဟုတ်ငါအခြားအားဖြည့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
မူအရဆိုရလျှင်၊ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ပို၍ သေချာစေရန်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဟယ်လို!! ကျွန်ုပ်၌သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်က ၂ လသာရှိသောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးသိုးထိန်းဖြစ်ပြီးခွေးကလေးသည်ကာကွယ်ဆေးမပါဘဲနှင့်မနှိမ်နင်းဘဲပေးခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်၎င်းကိုငါးကြိမ်ကာကွယ်ဆေး ပေး၍ ၎င်းတို့သည်နှင်းရည်ကျသော်လည်းကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာ .. သူတို့ကဒီဆေးကိုဝတ်ထားတာအဆင်ပြေရဲ့လား။ ဒါကသင့်ကိုမထိခိုက်ပါဘူး? ပြီးတော့ငါနှစ်ခုစလုံးကိုဘယ်အချိန်မှာအစားထိုးရမလဲ။ အခုအဲဒါကိုလမ်းပေါ်ထုတ်ပေးလို့ရမလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာကွယ်ဆေးထိုးအချိန်ဇယားမရှိပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည်သူအလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင်အဖြစ်အများဆုံးသောရောဂါများအပေါ် မူတည်၍ သူ့နောက်ကိုလိုက်ကြသည်။ နောက်တရက်တွင်သူပြောပြလိမ့်မည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်နောက်လဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်လေးပါ။ ကျွန်မရဲ့ချီဟွာဟွာခွေးကလေးက ၂ လပဲရှိသေးတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ၂ ခုပါ ကျွန်ုပ်၏ခွေးကလေးကိုလမ်းပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလမ်းလျှောက်ကာပေါင်းသင်းပါရန်ကျွန်ုပ်၏ခွေးငယ်ကိုခေါ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်လူအများကကျွန်ုပ်တို့၌ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးဖြင့်၎င်းကိုထုတ်ယူနိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါကျွန်တော့်သမီးမှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်၊ ငါသူဘယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရမလဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးသူမနာမည်ကိုဘယ်မှာထားရမလဲဆိုတာသိချင်တယ်။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမင်းကိုမှန်ကန်စွာနားမလည်ခဲ့ဘူး ကာကွယ်ဆေးများကိုသူ၏ဆေးခန်းရှိဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ကပေးသည်။ မင်းအဲဒီလိုမေးရင်ငါမသိဘူး
microchip ကိုထည့်ဖို့သွားတဲ့အခါနာမည်က veter ကသင့်ကိုခွေးကလေးရဲ့ file မှာရေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့ညကငါလမ်းပေါ်ကခွေးတစ်ကောင်ကိုကောက်ကိုင်လိုက်တယ်၊ သူမအသက်နှစ်လခွဲခွဲလောက်ရှိတယ်။ သူမကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ နှင်းမကျခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသူအိပ်နေသောအခါအော်ဟစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပူစေသည်။ ငါကာကွယ်ဆေးမထိုးထားရင်တောင်မှငါနဲ့အတူအိပ်နိုင်သလား။ ခွေးလှေးတွေမရှိဘူး
တစ်ယောက်ယောက်ကသူမကိုရှာနေတာဖြစ်လို့သူမမှာသူမချစ်ပ်ရှိမရှိသိဖို့သူ့ကို VET ဆီခေါ်သွားပါ။ စကားမစပ်၊ သူမဘာလုပ်နေတယ်၊ ​​သူဘာကြောင့်အော်နေတာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့သူ့ကိုစစ်ဆေးသင့်တယ်။
သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမဆုံးဖြတ်မီအနည်းဆုံး ၁၀-၁၅ ရက်လောက်စောင့်ရမည်။ ထိုအချိန်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိသားစုကယင်းကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးကလေးဘရူနိုသည် ၄ ​​လအရွယ်၊ မနေ့ကသောကြာနေ့မှာသူချစ်ပ်နှင့်တတိယကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်၊ ငါ့ကိုချန်ထားပါ၊ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အထိမထုတ်ရန်ပြောခဲ့သည်။ မနက်ဖြန် ??? ၂ ရက်လောက်ကြာလိမ့်မယ်။ သူကဆေးရုံတက်ရတာ ၄ ကြိမ်ရှိပြီ။ သူကဆေးစစ်တာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသူဟာဝက်ရူးပြန်ရောဂါဖြစ်နေတာကြောင့်သူဟာ luminaleta ကိုသောက်နေတယ်၊ .. ငါသူ့ကိုတကယ်လမ်းပေါ်ထွက်ခေါ်သွားချင်တယ်။ k သူ့ကိုတစ်နေ့ ၂၄ နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်၊ ​​သူတို့ကသူ့ကိုမလောင်ကျွမ်းစေဘူးဆိုရင်ထိန်းချုပ်မှုပြwithနာပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
သငျသညျနေမကောင်းခဲ့လျှင်, VET စကားကိုအမြဲနားထောင်ရန်သာ။ ကောင်း၏။ ကုသခြင်းထက်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။
ဟယ်လို။ ငါကသူတို့ကိုဂရုမစိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွေးစားဘို့ကစွန့်လွှတ်သူတစ် ဦး ထံမှယနေ့ခွေးကောက်သွားတာပါ။ သူဟာ ၄ လသားအရွယ်ရှိပြီးသူဟာကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးပါဘူး။ လက်ရှိပိုင်ရှင်ကိုသူကလမ်းပေါ်ထုတ်လိုက်သလားလို့မေးပြီးသူကဟုတ်တယ်၊ ငါ့မှာ distemper (သို့) parvo လက္ခဏာတွေရှိသလားဆိုတာငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ငါသူ့ကိုဖမ်းလိုက်ရင်မနက်ဖြန်သူ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခံမယ့်အထိသူအပြင်ကိုထွက်မသွားဘူးလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ၃ ပတ်ကြာခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ တစ်လနှင့်တစ်ပတ်အကြာတွင်သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရန်နှင်းရည်ကျစေခြင်းဖြစ်သည်။ ၈ ရက်မှာသူ့ကိုပထမဆုံးဆေးထိုးပေးပြီးဒုတိယနဲ့တတိယကိုတော့စီစဉ်ထားတယ်။ ပထမတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်မသူမကိုပန်းခြံတစ်ခုဆီခေါ်သွားနိုင်ပြီးခွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့်သူမသူ့ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးကဒ်မရှိသောခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ ယခင်ပိုင်ရှင်က၎င်းကိုကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ နှင်းရည်ကျစေခြင်းငှါသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကဒ်ပြားပေးရန်အချိန်များစွာကြာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထပ်မံမွမ်းမံ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အန္တရာယ်ရှိပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
ဒါထူးဆန်းပါတယ် တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ် ဦး သည်တိရစ္ဆာန်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးသောအခါ၎င်းသည်ဆေးရည်ကိုထည့်သည်။ ယခင်ပိုင်ရှင်ကသင့်အားမပေးလိုလျှင်၎င်းမှာသူ၌အမှန်တကယ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီဟုပြောသောအခါသင်လိမ်နေခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်ကငါ့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူပျောက်သွားရင်တောင်သူကခြောက်လနဲ့အထက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူကခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးရှိသလားဆိုတာကိုမင်းကိုပြောနိုင်တယ်။ ဒါကမဖြစ်မနေဖြစ်ရမယ်၊
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ခင်ဗျားမှာခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးရှိသလားဆိုတာသိဖို့ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်၌၎င်းမှာ မရှိ၍ သင်အသက်အရွယ်ရောက်နေလျှင်သင့်အားအန္တရာယ်အရှိဆုံးသောရောဂါများ (distemper, rabies, parvovirus, parainfluenza, adenovirus) မှကာကွယ်သည့် pentavalent ကာကွယ်ဆေးကိုသင်ရနိုင်သည်။
အကြောင်းမှာ deworming ပြofနာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြောင့်ဖြစ်လျှင်တစ်လစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒီကနေ့သူတို့ဟာကျွန်တော့်ကိုသုံးလအရွယ်ခွေးကလေးတစ်ကောင်ကိုပေးပြီးသူမှာကာကွယ်ဆေးမရှိဘူး၊ ၀ မ်းလျှောတာ၊ အော့အန်တယ်၊ မနက်ဖြန်သူ့ကိုသူ့ကိုветеринарဆီခေါ်သွားတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့သေစေလောက်တဲ့ရောဂါရှိနိုင်မလား။
ကျွန်တော့်ကိုမင်္ဂလာပါ၊ ယနေ့တွင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကို ၃ လသာရှိသောခွေးတစ်ကောင်ကိုပေးခဲ့သည်၊ သူသည်ကာကွယ်ဆေးမထိုးပါ၊ သူ၌အော့အန်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း ရှိ၍ နက်ဖြန်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်အားветеринарияသို့ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းသူ၌သေလောက်သောရောဂါရှိနိုင်သလော။
ဘာဘရာ yelen ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ ၉ ရက်လွန်ခဲ့သည့် ၉ ရက်ကကျွန်ုပ်အားသူ့ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်သည့်ခွေးကောင်လေးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ယူဆောင်လာချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တွင်အခန်းထဲ၌ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အိမ်အတွင်း၌အိပ်စက်ခြင်းမရှိသောအခြားခွေးများသူတို့အိမ်မှာကြီးမားသောကြောင့်သူတို့အိမ်မှာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ရှေ့ခြံဝင်းထဲမှာမဟုတ်တဲ့အိမ်ကိုပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ခွင့်ပြုတာကနေလမ်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော့်အမေမှာ parvo ပါတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိနေလို့ပါ။ ငါဒီကိုယူလာတဲ့အချိန်မှာငါအခန်းထဲမှာရှိတာကကလိုရင်းပါတဲ့ကြမ်းပြင်ကိုလျှော်တယ်။ ဖိနပ်၌ပင်အိမ်သို့ခေါ်သွားပါ
Barbara yelen အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါမော်နီကာ၊ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂျာမန် sheper နှင့် chiguagua ရောနှောထားပါသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၇ ထိ ၁၀ ပတ်ကြာပြီဖြစ်ပြီး၊ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် parvovirus distemper coronavirus အတွက်ကာကွယ်ဆေးသုံးချောင်းကိုပြီးအောင်ချပြီးပါပြီ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်မှနို ၀ င်ဘာ ၁၁ ရက်အထိရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်တိုင်းမှာဆေးထိုးသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးကျွန်တော်ငိုရင်းငိုလျှင်သူမမည်သူမျှမထိချင်။ ငါသာပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါသိချင်တယ်။ အိုးငါနှင်းမုန်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့တခြားလူတွေကငါမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆေးလုံးကိုငါမသောက်ဘူး၊ ငါမသောက်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းကိုမေ့လိုက်တယ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကတည်းကပေးသင့်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးများသည်သင်ဖော်ပြသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်နာရီအနည်းငယ်အတွင်း၌ဖြစ်တတ်သည်။ တိုးတက်မှုမရှိပါကတိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
Antiparasitic ဆေးများကိုကာကွယ်ဆေးမထိုးမီသောက်သင့်သည်၊ သို့သော်တိရိစ္ဆာန်များကိုအူကပ်ပါးကောင်များမှကင်းဝေးစေရန်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးလတစ်ကြိမ် (ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကဖော်ပြသည်) ကိုပေးသင့်သည်။
အိုမာ VR ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးကို ၂ ပတ်လောက်လွဲချော်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်တတိယကာကွယ်ဆေးကိုရနိုင်သေးပါသလား ?????
Omar VR အားစာပြန်ပါ
ငါ့မှာ ၅၃ ရက်ရှိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုပေးတယ်။ ၆ ပတ်လောက်မှာသူမစာအုပ်ငယ်ထဲမှာသူမ parvo-virus နဲ့သူမနှင်းရည်ထိုးတာကိုကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့တယ်။
ထိုအချိန်အတောအတွင်းသူတို့ကသူမကိုကျွန်ုပ်အားမပေးမီသူမအမေနှင့်အတူရှိနေခြင်းဖြစ်သဖြင့်သူမ၏ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်သူမနို့တိုက်မိသည်။ ပြaနာရှိလား ကာကွယ်ဆေးထိုးပြန်စရန်လိုပါသလား။
ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့အချိန်ဇယားကကျွန်တော့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သူ ၂ လပြည့်သည့်နေ့၌ဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ၇-၈ နှစ်အရွယ်ခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမကိုရက်ပေါင်း ၃၀ ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်အားယူဆောင်လာမည့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်အားနှင်းရည်နှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နေ့နှင့် အကယ်၍ ရှိပါက သူမ၏ခွေးနှင့်အတူရတဲ့ရတဲ့အတွက်ပြwithနာ။
မဟုတ်ပါ၊ မူအရမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ 7-8 နှစ်အရွယ်ခွေးအားကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကျန်းမာစေပါကပြproblemsနာမရှိပါ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ပို၍ သေချာစေရန်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
ယေရှု J ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌နှစ်လခွဲခွဲစိတ်ထားသောခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ရှိသော်လည်းသူသည်ကာကွယ်ဆေးတစ်ခါမျှမရရှိပါကကျွန်ုပ်အားသူ၏ဆေးများအားလုံး (သို့) သူနှင့်သက်ဆိုင်သောသူများအားကျွန်ုပ်ပေးရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည် ၁၀ ပတ်သာရှိသေးသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရွယ်ပမာဏကိုသာထည့်ပြီး ၈ ပတ်ကြာဆေးကိုထပ်မထည့်တော့ပါ၊ နောက်တစ်မျိုးသည်ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါကနောက်ကျလျှင်ပင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်လေးစားသင့်သလော။ ??
Jesus J ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း။ ။ မကြာမီငါ shitzu ခွေးကလေးကိုငါ့အိမ်သို့ခေါ်လာသည်။ သူကသူ့ကိုပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးပေးပြီးသူထွက်သွားသည်။ သူသည်ချစ်ပ်ရှိပြီ။ ဆေးရုံမှဆင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကလေနှင့်နေတို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးတစ်နေ့လုံးသော့ခတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ၊ ငါးရက်အတွင်းဒုတိယကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့်လမ်းရဲ့မြေပြင်နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘဲနဲ့။ ဖျားနာနေသောခွေးမရှိ။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယကာကွယ်ဆေးမရှိလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိနိုင်ရန်အတွက်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောခွေးအချို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နေလဲ။
PS: သူ့ကိုသူ့ကိုကာကွယ်ဆေးတွေ၊ ကျန်းမာပြီးအိမ်မှာနေတဲ့ခွေးနှစ်ကောင်နဲ့အတူထားလိုက်တယ်။ သူကပထမဆုံးအကြိမ်လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါသူဟာသူ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ သူလည်းသူပြန်ပြောမှာပါ။ jhehe နဲ့အခြားခွေးများကိုချစ်တယ်ဒါပေမယ့်ငါအမှားလုပ်မိရင်ငါစိတ်ပူမိတယ်
အဲလစ်ဇဘက် silva ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော့်နာမည် Elizabeth ပါ၊ ကျွန်တော်4လသား ခွေးကလေး မွေးစားလိုက်ပါတယ် ဒီနေ့5လရှိပါပြီ၊ တစ်ကြိမ်ပဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ပိုးသတ်တာ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ လမ်းလျှောက်ချင်တာလား လမ်းဘေး ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကာကွယ်ဆေး ကျေးဇူး၊ ချီလီမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား